Fitantanana ny haran-dranomasina eo amin'ny fanamafisana ny ascense | Reef Resilience
Mitantana haran-dranomasina eo anatrehan'ny tarehiny
Apr 11, 2014 | Vaovao
Ao amin'ny "Fiomanana hitantanana ny haran-dranomasina ho an'ny fanamafisana ny ranomasina: lesona avy amin'ny fandalovan'ny vatohara," i Dr. Elizabeth McLeod sy ireo mpiara-miombon'antoka aminy dia miady hevitra hoe ahoana no ahafahana manova ny paikadin'ny fitantanana mba hifehezana ny fivalanana ho an'ny haran-dranomasina. Ny mpanoratra dia nanamarika fa raha ny fampihenana ny CO2 dia ny dingana lehibe indrindra hifehezana ny fanamafisana ny ranomasina, dia mihoatra lavitra noho ny mpandraharaha reefatra. Manasongadina ny maha-zava-dehibe ny paikady fitantanana izy ireo mba hiantso ny fanamafisana ny ranomasina, anisan'izany ny: fampielezan-kevitra ara-pototra; Fitantanana ny fifandraisana eo amin'ny loharano sy ny harambato; ary nanatsara ny fitantanana ny fitohanan'ny aterineto mba hanatsarana ny faharetan'ny haran-dranomasina. Ireo fikarohana dimy voalohany dia fantatra koa mba hampidirana ny fanamafisana ny ranomasimbe amin'ny planeta sy ny fitantanana ny fiarovana. Vakio ny abstrakt na mailaka resilience@tnc.orgmamorona mailaka vaovao ho an'ny kopian'ny lahatsoratra.
manokatra fisie IMAGE Nanontanianay ny Dr. McLeod fanontaniana vitsivitsy mikasika ny fanasiana, ary izao no nolazainy:
Inona ny faritra vatoharan-dranon'ny vatohara no heverinao fa hisy fiantraikany amin'ny famafazana ny ranomasimbe voalohany?
Misy faritra sasany toa ny Harambato Lehibe, ny Coral Sea, ary ny Karibeana Karaiba, dia nomanina haingana be ho an'ny aragonite ambany kokoa noho ireo faritra hafa manan-danja toy ireo any amin'ny Pasifika Afovoany. Ny ampahany sarotra amin'izany rehetra izany dia ny fandinihana ireo fanadihadiana maneran-tany ny fanamafisana ny ranomasina ary ankehitriny dia mahafantatra isika fa ny dingana eo an-toerana dia mety mbola manan-danja kokoa amin'ny fiantraikany any amin'ny chimie oceans noho ny dingana manerantany. Ny dingana arak'asa momba ny haran-dranomasina dia mety hampitombo na hampihenana ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny tosi-drononon'ny ranomasina, ka tena sarotra ny maminavina ny karazana faritra iray raha oharina amin'ny iray hafa.
Inona avy ireo dingana manaraka tokony horaisin'ny mpikarakara vatohara ho an'ny vatohara rehefa avy namaky ity lahatsoratra ity izy mba hiresahana ny fiantraikan'ny fananganana ranomasina ao amin'ny tranokalany?
Ilaintsika ny hampihenana ny fitaintainana araka izay azo atao mba hanohanana ny faharetan'ny haran-dranomasina. Amin'ny fihazonana ny vatohara salama, dia afaka miatrika tsara kokoa ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetr'andro sy ny fanamafisana ny ranomasina izy ireo. Raha ny tokony ho izy, mila mampihena ny fampiasana ny tany isika
loharanon'ny fahalotoana; zava-dehibe indrindra amin'ny fitantanana OA satria ny otrikaina toy ny fosforôra sy ny azota dia mety hampidina ny faritry ny saturation pH sy aragonite amin'ny ranomasina. Ny fitantanana herbivores dia manakiana ihany koa satria ny zava-maniry dia manan-danja tokoa amin'ny fanarenana ny haran-dranomasina aorian'ny fikorontanana - mitazona ny fitomboan'ny algaly mba hitoeran'ny haran-dranomasina sy hitombo. Ny fehiny dia ny fampihenana ny adin-tsaina dia manampy amin'ny fanohanana ny fahasalaman'ny tontolo iainana ary noho izany dia hanampy ny zavamananaina an-dranomasina hifantoka amin'ny fitomboany, ny fikajiana ary ny fiterahana mifanohitra amin'ny fanarenana amin'ny fahasimbana.
Raha nanao fikarohana ho an'ity lahatsoratra ity ianao, nahafantatra zavatra hafa manohitra ny saina na mahagaga mikasika ny fanolorana ny fitantanana ny ranon-dranomasina?
Eny. Nanafintohina ahy ny fahasamihafana lehibe teo amin'ny pH sy ny satroboninahitra aragonita teo amin'ny vatoharan-dranomasina sasany. Ohatra, ao amin'ny Reef ao amin'ny Heron Island ao amin'ny GBR, ny fiovaovan'ny pH sy ny aragonite saturation mihoatra ny iray andro dia lehibe noho ny fiovaovan'ny fiovaovan'ny toetr'andro any amin'ny 2050 maneran-tany. Tena goavana izany. Midika izany fa tena manan-danja tokoa ireo fotodrafitr'asa eo an-toerana izay afaka mitondra ireo fiovana ireo.
Azonao atao ve ny mamolavola bebe kokoa ny manampahefana liana hianatra bebe kokoa momba ny fanangonana ranomasina?
NOAA Pacific Laboratory Environmental Laboratory has a tranokala lehibe ary ny Woods Hole Oceanographic Institution dia nametraka ny zava-misy marina marina izay misy FAQs momba ny fanamafisana ny ranomasinamanokatra fisie PDF . Amin'ity tranonkala ity dia hahita ianao Overview ny fomba fanamafisana ny ranomasina, ary fitantanana ny fanamafisana ny ranomasina.